I-Watchtower ONLINE LIBRARY (okanye i-WOL) Isixhobo Sokuphanda | Incwadi Yonyaka Ka-2014
NgoJuni 28, 2013, iwebhsayithi ethi jw.org iye yanesaziso esithi i-Watchtower ONLINE LIBRARY (okanye i-WOL) ngoku ifumaneka ngeelwimi eziyi-100. Indlela esebenza ngayo i-WOL ibufana neWatchtower Library efumaneka nge-CD-ROM. Uninzi lweekhompyutha, iismartphone kunye neetablet ezineIntanethi zinokuyisebenzisa. Uninzi lweencwadi onokuphanda kuzo ziqala ngonyaka ka-2000 ukubheka phambili. Iilwimi ezininzi zinayo neNguqulelo Yehlabathi Elitsha kunye ne-Insight on the Scriptures. Kule WOL unokukhangela igama, ibinzana okanye amagama aliqela njengokuba ubuya kwenza kwi-Watchtower Library. Xa uyisebenzisa unokukhangela izibhalo okanye inkcazelo ngolwimi oluthile ukanti uyakwazi ukuyijonga nangolunye ulwimi. Khawuve ukuba abanye bathini ngale ndlela yokuphanda intsha:
“Enkosini kakhulu nge-WOL. Ndavuya gqitha ukuyibona kwam. Andimdanga kangako kwiikhompyutha nakwiiWebhsayithi kodwa ndiyabona ukuba le ndlela yokuphanda isemagqabini. Indlela enibathanda ngayo abamelwane, abazalwana noYehova ibonakala ngokucacileyo. Indlela eyenziwe ngayo i-WOL ibonisa akuba nisikhathalele. Esi sesona sipho sikhulu endakha ndasifumana esibonisa indlela uBawo uYehova andithanda ngayo. Enkosi kakhulu.”—UA. , waseArgentina.
“Andiyikholelwa ke le! Ndingene kwi-WOL ngale mva kwemini, ndaza ndafumanisa ukuba olunye lweelwimi ezintsha sisiCreole saseHaiti. Ndandingatsho ukuba kungaze kwenzeke oku. Andazi nokuba ndithini kule leta. Kwanga uYehova anganisikelela nomoya wakhe oyingcwele uqhubeke unikhokela.”—UD.C. , waseUnited States.